warkii.com » Tottenham Oo Guul Ay Ku Rafaadday Ka Gaadhay Arsenal, Son Oo Gunners Ku Ciqaabay Qalad Ay Difaacu Sameeyeen Iyo Mourinho Oo 3 Dhibcood Oo Muhiim Ah Helay
Tottenham Oo Guul Ay Ku Rafaadday Ka Gaadhay Arsenal, Son Oo Gunners Ku Ciqaabay Qalad Ay Difaacu Sameeyeen Iyo Mourinho Oo 3 Dhibcood Oo Muhiim Ah Helay
Kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa guul muhiim ah ka gaadhay Arsenal oo ay ku qaabishay garoonkeeda Tottenham Hotspur Stadium, waxaanay ugu dhiibtay 2-1.
Arsenal ayaa la hormartay gool uu daqiiqaddii 16aad u dhaliyey Lacazette oo bannaanka ka toogtay goolka uu waardiyaha ka ahaa Lloris, laakiin qalad ay sameeyeen Kolasinac iyo David Luiz ayaa laba daqiiqadood oo kaliya kaddib sababay in goolka barbarraha ay Tottenham la timaaddo, waxaana u dhaliyey Son.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Tottenham xaqiiqsatay saddexda dhibcood ee kulanka, waxaana kubbad ka timid Son madax ku qabtay Toby Alderweireld oo goolka labaad ee kooxdiisa ku farxad geliyey Jose Mourinho.
Mikel Arteta ayaa goolka kaddib sameeyey isbeddello badan, laakiin waxa shaqaysay taatikada Jose Mourinho ciyaarta kusoo galay oo inteeda badan ahayd in khadka dhexe iyo difaaca la adkeeyo.
Tottenham ayay guushani siisay inay soo gasho kaalinta siddeedaad oo ay yeelato 52 dhibcood, halka Arsenal ay kaalinta sagaalaad ku haysato 50 dhibcood.
Kaydka: Ainsley Maitland-Niles, Cedric Soares, Sokratis, Joseph Willock, Matt Macey, Rob Holding, Reiss Nelson, Bukayo Saka, Lucas Torreira.
Kaydka: Ryan Sessegnon, Paulo Gazzaniga, Steven Bergwijn, Gedson Fernandes, Jan Vertonghen, Japhet Tanganga, Erik Lamela, Oliver Skipp, Tanguy Ndombele.
Jose Mourinho ayaa safkiisa ku sameeyey saddex beddel, iyadoo uu keenay saddex ciyaartoy oo aanu dheelsiinin ciyaartii hore ee Bournemouth. Sanchez ayaa beddelay Vertonghen, sidoo kale Bergwijn ayaa kasoo hormaray Lamela halka Son uu kaydka u diray Lucas. Laakiin Mikel Arteta ayaa kaliya hal beddel ku sameeyey shaxdii uu kula ciyaaray Leicester City, waxaanu soo qaddimay Pepe iyadoo uu fadhiisiyey da’yarka Saka.
Kulanka loo yaqaano ‘Hirdanka Deriska Woqooyiga London’ ayaa ku bilaabmay jawi ay labada kooxoodba u dagaallamayaan inay sare ugu soo ruqaansadaan kaalinta siddeedaad si ay fursad uga raadsadaan Europa League xili ciyaareedka dambe, waxaana dardaaran usoo qaddimay ciyaartoyda labada tababare.
Tottenham ayaa firfircooni samaysay waxaana kubbad goolka loo hordhigay Harry Kane, waxaase goobta joogay goolhaye Martinez oo bandhig cajiib ah samaynayay tan iyo markii uu fursadda ka helay dhaawaca Bernd Leno. Balse Arsenal ayay ahayd midda khatarta badan samaynaysay ee awoodda u lahayd inay daqiiqadihii ugu horreeyeyba kubbadaha geysto xerada ganaaxa Tottenham.
Daqiiqaddii 16aad ayay Arsenal hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana kubbad qurux badan oo gantaal ah shabaqa ku hubsaday Alexandre Lacazette oo masaafo 20 yard ah ka toogtay goolka uu waardiyaha ka ahaa Hugo Lloris oo aan wax fursad ah u haysan inuu kubadda joojiyo.
Xhaka oo kubadda usoo dhiibay Lacazette ayaa ka faa’iidaystay qalad uu sameeyey difaaca midig ee Tottenham ee Aurier oo ay kubaddu ka fogaatay, waxaana helay weeraryahanka reer France oo bannaanka diilinta ka toogtay goolka, kaddibna bilaabay damaashaadka goolkiisa.
Tottenham ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay goolka Arsenal, waxaana laba daqiiqadood oo kaliya kaddib goolka Gunners ay Tottenham dhalisay goolka barbarraha. Baas qaldan oo uu dhiibay Kolasinac oo doonayay inuu la xidhiidho Luiz ayaa waxa ka faa’iidaysay Son oo aan wax fursad ah siinin goolhaye Martinez iyo Luiz labadaba, waxaanu kooxdiisa kaga farxiyey goolka uu usoo celiyey.
Kieran Tierney ayaa qaybtii hore kubbado badan ka keenay dhinaca bidix, waxaanu la raadsanayay Aubameyang iyo Lacazette, kuwaas oo abuuray haliso madaxa ah, hase yeeshee qaybta hore ayaa kusoo dhamaatay barbarro 1-1 ah.
Qaybta labaad ayaa ku bilaabantay Tottenham oo uu dhegaha wax ugu soo sheegay Jose Mourinho, waxaana falcelinta ugu badan sameeyey Harry Kane oo bilowgiiba laba kubbadood oo toogasho wanaagsan ah sameeyey.
Weeraryahanka reer England oo 10 gool ka dhaliyey Arsenal kulamadii uu ka hor tegay, waxa heegan ugu jiray difaaca Gunners oo u muuqday inay soo daraaseeyeen qaabka uu kubadda u qaato iyo halka uu fursadaha ka raadsadaba.
Martinez ayaa badbaado weyn sameeyey daqiiqaddii 81aad ee ciyaarta, waxaana uu kubbad ka qabtay Lucas iyo Kane oo baasas soo w ada ciyaaray, waxaanu goolhayuhu si degdeg ah ugu jawaabay dedaal uu Kane ku doonayay inuu kubadda ku dhaafiyo.
Tottenham ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqaddii 81aad, waxaana kubbad halis ah xerada ganaaxa kusoo dhex-tuuray Son halkaas oo uu Alderweireld ku qabtay madaxa khatar ah oo shabaqa markiiba taabatay, waxaanay ciyaartu noqotay 2-1.
Mikel Arteta ayaa goolka laga dhaliyey kaga falceliyey ciyaartooyo uu beddel kusoo geliyey, waxaanu mar kaliya wada saaray Bellerin, Kolasinac iyo Tierney, isaga oo soo geliyey Cedric Soarez, Bukayo Saka iyo Joseph Willock, laakiin shanta daqiiqadood ee ciyaarta ka hadhsanaa ayaa ku yaraa si ay isbeddel fiican ugu samayn karaan ciyaarta.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-1 ay guushu ku raacday Tottenham oo soo fadhiisatay kaalinta siddeedaad, waxaanay xoojiyeen rajada ay ka qabaan inay kaalmaha hore ugu soo ruqaansadaan si ay uga qayb-geli karaan Europa League xili ciyaareedka dambe.
Spurs waxay leedahay 52 dhibcood, waxaanay saddex dhibcood ka dambeeyaan Wolves oo kaalinta lixaad ku jirta, halkaas oo ah meesha uu Mourinho doonayo inay ugu yaraan kooxdiisu ku dhamaysato horyaalka kulamada kooban ka hadhsan yihiin.